Sina Fototra feno hidradradradra Liquid concealer 6ml miaraka amina Matte izay manome mandritra ny tontolo andro anaovana orinasa mpamorona makiazy maharitra sy mpanamboatra | Jinfuya
Fitaovana feno hydrate Liquid concealer 6ml miaraka amina Matte izay manome mandritra ny tontolo andro makiazy maharitra
Full Coverage Hydrate Concealer J202A dia manome hydration ny hoditrao ho an'ny famaranana satin izay tsy mikororosy. Ary rakotra avo lenta, mitafy lava kokoa ary lavorary hanafenana ireo faribolana ambanin'ny maso mena sy teboka malemilemy.
Item No. J202A
mihasimba Mamy, malefaka, tapitra satin, fandrakofana feno, maharitra maharitra,Tsy tantera-drano, hydrate, Flawless
Mety amin'ny Ny alokaloka maherin'ny 20 dia mety mifanaraka amin'ny volon'ny hoditra rehetra
Atiny Net 0.203 fl. oz. (6mL)
asa Afeno ny mason-koditra, faribolana mainty ao ambanin'ny maso. Mena sy manitsy ny lokon'ny hoditra tsy mitovy
Mampanantena isika CRUELTY-FREE, vegan ary 100% afaka amin'ny Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, ary Hydroquinone.
Concealer Hydrate feno fandrakofanaJ202A manome ny hydration anao ho an'ny satin vita farany izay tsy mikororosy. Ary rakotra avo lenta, mitafy lava kokoa ary lavorary hanafenana ireo faribolana ambanin'ny maso mena sy teboka malemilemy.
Ity takona afenina ityno fitaovam-piadiana miafinao hametrahana ny endrikao tsara indrindra. Ny masomboly masina an'ny mpanafina amin'ny ambaratonga manaraka, ity firafitry ny hamandoana ity, feno ronono, dia mifangaro toy ny hoditra faharoa manamboatra ny sehatra amin'izay jerena izay irin'ny fonao. Apetraho amin'ny fampiharana vovo-jiro maivana ho an'ny fomba voajanahary sy minimalista, na mandehana maximalist feno miaraka amin'ny molotra mena sy eyeliner mainty.
Ataovy mihoatra ny refy telo-refy ny endrikao. Ny tavoahangy porofon-drano sy ny hatsembohana dia mandray menaka hahazoana vokatra maharitra. Avelao ho lasa isan'andro ny hatsaran-tarehy, ary ampianaro ny vehivavy ny fomba hahatongavan'ny zazavavy tsara tarehy sy mahafatifaty.
1.Tsy misy habibiana, vegan ary 100% afaka amin'ny Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, ary Hydroquinone.
2.Omeo hydration ny hoditrao ho an'ny satin farany tsy mihetsika.
3.Ampiasao ny tsorakazo hametahana takona amin'ny faritra irina ary apetaho moramora amin'ny rantsantanana, borosy na spaonjy.
4.Hita amin'ny alokaloka 23 hafa.
Sarona avo lenta, mitafy lava ary mety tsara hanafenana ireo toerana maloto sy faribolana ambanin'ny maso ireo.
Fomba fampiasana azy
Teo aloha: 18 Taona fanaovana lokom-bolo mando ho an'ny orinasa - Lokom-bolo vita amin'ny menaka fikosoham-bolo vita amin'ny labozia vita amin'ny labiera vita amin'ny menaka manitra molotra maharitra ho an'ny molotra manify - Jinfuya
Manaraka: Fandraisana an-tsokosoko ranon-javatra 6ml matte farany famaranana maharitra 16 ora endrika miafina maharitra miaraka amina kalitao avo lenta
Foundation maharitra maharitra maharitra
Ny fandrakofana feno dia manala hydrat Liquid concealer 6ml amin'ny ...
Fototra matanjaka Liquid tsy misy menaka tsy misy fotony feno ...
Ambongadiny Silky Liquid Foundation 8 loko Weig ...
Makeup Base Primer Mety tsara amin'ny karazan-koditra M ...